SOMALITALK - DHULGARIIR
Dhulgariir Iran Kudiley in kabadan Kumayaal Qof
Waxaa soo ururiyey Bahda SomaliTalk.com | December 26, 2003
Eeg: Sawirada dhulgariirka.. Guji [cbc]
Dhulgariirka Iran: Sawirka: IRNA
Jimce ah (December 26, 2993) Dhulgariir ka dhacay Magaalada Bam ee ku taal gobolka Kerman ee koonfurta Iraan ayaa waxaa wararkii ugu horeeyey sheegeen in ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay shan kun (5000) sida ay werisey wakaalada IRNA ee iraan wararka u faafisa. Magaaladan oo taariikh dheer kuleh Iran waxa ay 1,000 km (600miles) koonfur ka xigtaa caasimada Tehran. Waxaana wararku intaas ku dareen in dad badani ay ku duugmeen guryohoodii.
Tirada dhimashada ayaa warar kale oo kasoo baxaya waxa ay sheegeen in ay geereyso ilaa 15,000 oo qof oo dhintay. Waxaa kale oo la soo weriyey in markii gabalku dhacay ay dadku dhaxanta ka shidanayeen geedaha baalmada si ay u kulaalaan waayo wax koronto ah ma jirin halkaas, dhismayaashiina waa dumeen, hawaduna aad ayey u qabowdahay. Hay'adaha samafalku waxa ay sheegeen in tirada dhimashadu ay gaareyso 20,000 qof.
Saxaafada gobolka uu dhul gariirku ka dhacay ayaa sheegtay in laba cisbitaal ay dumeen oo shaqaalihii cisbitaaladaasina ay ku duugmeen dhismihii dumey, halka cisbitaalada kale ee magaaladu ay dhaawac la buuxsameen.
Gabar 17jir ah oo magaciise la yiraahdo Maryan ayaa tiri waxaa dhulgariirka ku dhintay "labadaydii waalid, ayeeyaday iyo labo gabdhood oo walaalahay ah, oo dhammaantood ku hoos jira burburka guryaha".
Hooyo ku dul barooraneysa meydkii gabadheeda
Sawirada dhulgariirka. [cbc]
Governatooraha Gobolkaas oo magaciisa layiraahdo Mohammad Ali Karimi waxa uu sheegay in dad badani ku duugmeen guryaha hoostooda, waxana uu sheegay in dhulgariirka ka dhacay magaalada Bam uu ahaa 6.3-Richter scale (oo ah cabirka lagu qiyaaso baaxada dhulgariirka), kaas oo dhacay waaberigii Jimcada, waxana uu dhulka la simay 60% dhismayaashii magaalada. Wararka TV-ga Irana waxaba uu tirada guryaha dumey gaarsiiyey ilaa 70%. Waxaana TV-gu tirada dhawaca gaarsiisey ilaa 30,000 oo qof.
Jaamacadda Tehran University Kuliyadeeda Joqraafiga waxa ay cadaysay in baaxada dhulgariirku uu ahaa 6.3-Richter kaas oo dhacay 5:28:59 AM waqtiga Iran, oo u dhiganta (0158 GMT), Jimce December 26, 2003. Xilliga uu dhul gariirku dhacay oo ay dadku weli guryohooda joogaan ama ay hurdaan. Dhibaatada ugu weyn ee dhulgariirkani waxaa lagu soo waramayaa in ay gaartey dadka reer guuraaga ah.
July 21, 1990 ayay ahayd markii uu dalka Iraan dhulgariir cabirkiisu ahaa 7.3 ilaa 7.7 uu dalkaas ku diley 50,000 oo qof (Konton kun).
Qarnigii 20aad ee ina dhaafay waxaa lagu qiyaasay in dhulgariirku uu adduunka dacaladiisa ku diley dad lagu qiyaasay ilaa saddex million oo qof. Dhulagariirada ugu halisnanaaa waxa ay ka dheceen melaha kala ah:
Dhulgariirkii ka dhacay China May 22, 1977 oo cabirkiisu ahaa 8.3 ayna kudhinteen 200,000 iyo kii kale ee isla dalkaas China ka dhacay July 28, 1976 oo cabirkiisu ahaa 7.8 ilaa 8.2 oo ay ku dhinten 242,000 qof.
Dhulgariirkii Japan, sept 1, 1920 ee cabirkiisu ahaa 8.3 oo ay ku dhinteen 100,000 qof.
Wararka ugu dambeeyey ee dhulgariirka... GUJI
Afrika: Diyaarad ku qaraxday dalka ku yaal afrikada galbeed ee Benin ayaa waxaa ku dhintay 90 qof, daawo halkan